तपाईलाई ताडलाफिल - बुयासको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने सबै कुरा
1. Tadalafil पाउडर के हो?
Tadalafil पाउडर (171596-29-5) एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि हो जुन ट्याब्लेट र पाउडर जस्तो विभिन्न मौखिक रूपहरूमा उपलब्ध छ। यो औषधि बजारमा बिभिन्न ब्रान्ड नामहरू जस्तै Adcirca र Cialis अन्तर्गत उपलब्ध छ। साथै, tadalafil यसको सामान्य रूप मा अवस्थित छ। यद्यपि तपाईलाई जेनेरिक टेडालाफिल पाउडर प्रयोग गर्न सल्लाह दिइदैन किनकि यसमा सबै मूल ड्रग्सको शक्तिको अभाव हुन सक्छ; यसैले, तपाई अत्यन्त सावधान हुनुपर्दछ जब यो औषधि tadalafil खरीद गर्दा। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले राम्रो नतिजाका लागि सही टेडलाफिल फारम किन्नुभयो। तपाइँको डाक्टरले कसरी र कहाँ गुणस्तर Tadalafil पाउडर किन्नको लागी मार्गदर्शन गर्दछ.
Tadalafil (171596-29-5) विभिन्न स्वास्थ्य शर्तहरूको उपचार गर्न विभिन्न ब्रान्ड नाम अन्तर्गत प्रयोग गरीन्छ। उदाहरणका लागि, सियालिस प्रायः इरेक्टाइल डिसफंक्शन वा पुरुषहरूमा नपुंसकताको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ साथ साथै सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जसलाई सामान्यतया बढाइएको प्रोस्टेट भनिन्छ। अर्कोतर्फ, एडक्रिका, जुन अर्को टेडालाफिल ब्रान्ड पनि हो, पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचापको उपचारमा प्रयोग हुन्छ। Adcirca पुरुष र पुरुष दुबै पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचापबाट पीडित महिलाहरूमा व्यायाम क्षमता सुधार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ।
गम्भीर साइड इफेक्टको सामना गर्नबाट जोगिन यो तपाईको डाक्टरको निर्देशनमा यो औषधी लिनु सँधै राम्रो हुन्छ। तपाईले सजिलैसँग टेडलाफिल पाउडर कसरी पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा मेडिकल परीक्षण बिना नै लिनुहोस्। केवल किनभने ड्रगले तपाइँको साथीको लागि काम गरिरहेको छ, यो स्वचालित होइन जुन तपाइँमा गुणात्मक परिणाम दिनेछ। मानव निकाय बिभिन्न छन्, र त्यसैले किन तपाईको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरी तपाईको डाक्टरले तपाईको लागी सही खुराक निर्णय गर्नु पर्छ। जब दुरुपयोग वा प्रयोग गरियो, ताडालाफिलले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ जुन रिभर्स गर्न महँगो हुन सक्छ र कहिलेकाँही पूर्ण अपरिवर्तनीय।
2.कसरी Tadalafil पाउडर काम गर्दछ?
Tadalafil पाउडर औषधीहरूको बीच हो जुन phosphodyterase प्रकार5अवरोधकर्ताहरू (PDE5) को रूपमा चिनिने औषधिहरूको वर्गसँग सम्बन्धित छ। यस वर्गका सबै औषधिहरू समान तरिकाले काम गर्दछन् र चिकित्सकहरूद्वारा प्रायः समान स्वास्थ्य अवस्थाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया, लागूपदार्थलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकृत गरीन्छ जुन वर्ग भनिन्छ। समूहहरूले समान गुणहरू सहित ड्रग्स समावेश गर्दछ र ती समान तरिकाले काम गर्दछ। Tadalafil मूत्राशय र प्रोस्टेट मांसपेशिहरु को आराम गर्न मद्दत गर्दछ, जो तपाइँको सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) लक्षणहरु लाई बृद्धि गर्दछ; दुखाई जब पेशाब, समस्या पेशाब र तत्काल वा नियमित पेशाब गर्न को लागी।
यस औषधिले तपाइँको शरीरको रगत प्रवाहलाई लिंगमा बृद्धि गर्दछ, जसले फलस्वरूप इरेक्शन प्राप्त गर्न र राख्न मद्दत गर्दछ। Tadalafil अधिकतर पुरुषहरुमा erectile dysfunction को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ, तर यो मात्र तपाईलाई एक पटक यौन उत्तेजित हुन मद्दत गर्दछ। जब पेनिस रगतले भरिन्छ पेनल इरेक्शन हुन्छ। निर्माण रगत नलिका आपूर्ति को लागी जिम्मेवार रगत नलीहरु र रक्त आपूर्ति बढाउन पछि लि happens्ग हुन्छ जब ती लि contract्ग को करारबाट रगत हटाउने काम को। जब रगत तपाईंको लिis्गमा जम्मा हुन्छ, यसले इरेक्शनको कारण दिन्छ। अध्ययनले देखाएको छ कि tadalafil कडा र टिकाऊ erection प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता बढाउने पुरुषहरूको लागि जसलाई स्तम्भित रोग हो।
पीएएचका लागि, यो औषधिले तपाईंको रगत नलीहरूलाई तपाईंको फोक्सोमा आराम दिन्छ रगत प्रवाह बढाउनको लागि, जसले फलस्वरूप व्यायाम गर्ने तपाईंको समग्र क्षमतामा सुधार गर्दछ। जब यो औषधि लिनुहुन्छ, तपाईंसँग लामो घण्टा काम गर्ने र सम्भावित छोटो समयमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त शक्ति हुनेछ।
3.कसरी Tadalafil पाउडर लिन?
मेडिक्सको सल्लाह: तपाई आफैंलाई यौन गतिविधिमा संलग्न गर्नु भन्दा पहिले कम्तिमा 30 मिनेट ताडालाफिल पाउडर लिनु पर्छ। औषधि उपयोगी हुन्छ जब तपाईं यो खाना बिना वा बिना नै लिनुहुन्छ। तपाइँ केवल सेक्स गर्न चाहानुहुन्छ मात्र ट्याडलाफिल लिनु पर्छ। यद्यपि, पुरुषहरू जसले एक हप्तामा तीन गुणा बढी वा बढी स्वाभाविक यौन सम्बन्ध राख्न मनपराउँदछन्, तब तिनीहरू दैनिक खुराकको लागि जान सक्दछन्, जुन दुई खुराक, 2.5mg र 5mg मा आउँदछ। प्रति दिन सिफारिस गरिएको खुराक 10mg हो, तर जब यो तपाइँलाई पर्याप्त छैन, तब तपाइँको चिकित्साले 20mg लाई खुराक बढाउन सक्छ। यद्यपि उन्नत ट्याडलाफिल पाउडर साइड इफेक्टहरू हटाउनको लागि खुराक परिवर्तन गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्।
ताडालाफिल प्रत्येक 24 घण्टामा मात्र एक पटक लिनुपर्दछ। जब तपाइँले अपेक्षा गरेको इरेक्शनहरू प्राप्त गर्नुहुन्न, उहि दिनमा अर्को खुराक नथप्नुहोस्। यो धेरै सामान्य छ tadalafil प्रयोगकर्ताको लागि वांछित परिणाम प्राप्त गर्न ढिलाइ अनुभव गर्न को लागी। यस लेखमा माथि उल्लेख गरिएझैं मानव शरीरहरू फरक-फरक हुन्छन्। केहि व्यक्तिहरूले 30 मिनेट अवधिमा टेडालाफिल पाउडर परिणामहरू अनुभव गर्न सक्दछन् जबकि अरूले ढिलाइ अनुभव गर्दछन्। यद्यपि, डाक्टरहरूले सल्लाह दिन्छन् कि तपाईले औषधीको खुराक आठ दिनको लागी तपाईले अधिक खुराक वा बिभिन्न उपचार विकल्प को लागी निर्णय गर्नु अघि।
तपाईंले कहिले पनि अन्य इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रग्स वा क्रिमको साथ टडलाफिल पाउडर लिनुहुन्न। तसर्थ, आफ्नो चिकित्सकलाई सूचित गर्नुहोस् यदि तपाईं कुनै अन्य ईडी औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ट्याडलाफिल खुराक सुरु गर्नु अघि। यद्यपि बजारमा विभिन्न टेडालाफिल विकल्पहरू छन्, जस्तै सिल्डेनाफिल, भियाग्रा, स्पेड्रा, र सियालिस, तपाईंले उनीहरूमध्ये कुनै पनि ताडालाफिल लिने जोखिम लिनु हुँदैन; यसले गम्भीर साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। एक पटकमा एक मात्र लिनुहोस् तर तपाईको डाक्टरको सल्लाह अनुसार। यसबाहेक, यदि तपाइँ मुटु सम्बन्धी समस्याहरू वा छाती दुखाइ जस्तो आइसोसोराबाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोराइड मोनोनिट्रेट, र मनोरन्जनात्मक औषधिहरू जस्ता पिपर्स जस्ता उपचार गर्न कुनै नाइट्रेट औषधि लिईरहनुभएको छ भने, तपाईंलाई पनि टाढा रहन सल्लाह दिइन्छ। ताडालाफिल पाउडर लिदै। कुनै नाइट्रेट औषधिको साथ टेडालाफिलको संयोजन गर्नाले रक्तचापमा गम्भीर कमी आउन सक्छ।
सुरक्षित पक्षमा हुन, आफूले लिने सबै औषधिहरू वा यदि तपाईं कुनै उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ भने तपाईंले ताडालाफिल लिनु अघि आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्। यदि तपाईंले दर्दनाक इरेक्शन अनुभव गर्नुभयो भने, वा इरेक्शनले4घण्टा भन्दा बढि समय लिन पनि तपाईंको मेडिकललाई तुरून्त सूचित गर्दछ। लामो समयसम्मको निर्माणले तपाईंको लि muscles्गको मांसपेशीहरूलाई बिगार्न सक्छ। साथै, यदि तपाईंलाई टाडालाफिलको लागि एलर्जी छ भने, यसलाई लिने जोखिम नलिनुहोस् र तपाईंको चिकित्सकलाई जानकारी गराउनुहोस् सुरक्षित विकल्पको लागि। ताडालाफिल इरेक्टाइल डिसफंक्शनका लागि एकदम शक्तिशाली औषधि हो, तर उन्नत प्रभावहरू हटाउन यसलाई धेरै सावधानी अपनाउनु पर्छ। राम्रो नतीजाहरूको लागि तोकिएको खुराकमा टाँसिनुहोस्।
4.Tadalafil पाउडर उपयोग
सामान्यतया, टाडालाफिल पाउडर नपुंसकता र इरेक्टाइल डिसफंक्शन जस्ता पुरुष यौन कार्य समस्याहरूको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यौन उत्तेजना बढाउनुको अलावा, ताडालाफिलले लिis्गमा रगत प्रवाहलाई पनि सुधार गर्दछ मानिस लाई लामो समय सम्म कडा इरेक्शन प्राप्त गर्न र सहनको लागि। यो औषधि लामो समयसम्म यौन अनुभवको लागि पुरुषहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनलाई चिनिन्छ। ताडालाफिल प्रयोगकर्ताहरूले कडा र लामो निर्माणको आनन्द लिन्छन्। जे होस्, औषधि प्रति दिन एक पटक र 30 मिनेट लिनु पर्छ सेक्स भन्दा पहिले।
अर्कोतर्फ, टाडालाफिल पाउडर सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) लक्षणहरूको उपचारमा पनि प्रयोग गरिन्छ। ड्रगले बीपीएच लक्षणहरूलाई कम गर्दछ जस्तै कमजोर प्रवाह, मूत्र प्रवाह सुरु गर्न गाह्रो, र बारम्बार पेशाब गर्ने, विशेष गरी मध्यरातमा। यहाँ tadalafil ले चिल्लो मद्दत र प्रोस्टेट मांसपेशिहरु आराम गरी तपाईं मद्दत गर्दछ। यद्यपि खरीद नगर्नुहोस् र ट्याडलाफिल पाउडर प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस् यदि तपाईले बीपीएच लक्षणहरू अनुभव गर्नु भन्दा पहिले तपाईको मेडिकल जाँच गर्नु पर्छ। याद गर्नुहोस् यो औषधि एक मेडिकल पेशेवरले हर समय निर्धारित गर्नुपर्दछ।
डाक्टरले फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप (पीएएच) को लागी टेडलाफिल पाउडर पनि निर्धारित गर्दछ। यो यस्तो अवस्था हो जहाँ तपाईंको रक्तवाहिकाहरूमा उच्च रक्तचाप हुन्छ र फोक्सोमा रगत पुर्‍याउँछ, र त्यसले चक्कर, सास फेर्न र थाक्छ। यस अवस्थाबाट पीडित धेरै व्यक्तिलाई नियमित व्यायाम गर्न गाह्रो लाग्छ। यद्यपि शुभ समाचार यो छ कि टडालाफिल पाउडरले पीएएच बिरामीहरूलाई आरामदायी रूपमा शरीरमा हुने अवस्थाको प्रभावहरूलाई कम गरी उनीहरूको कार्य गर्न मद्दत गर्दछ।
यद्यपि टाडालाफिलले तपाईंलाई यौन रोगबाट बचाउँदैन, जसमा हेपेटाइटिस बी, एचआईभी, सिफलिस र गोनोरिया पनि पर्छ। सबैमा, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईसँग हरेक पटक एक सुरक्षित र सुरक्षित सेक्स छ। यदि तपाईं यौनको समयमा कसरी आफूलाई सुरक्षित गर्ने बारेमा निश्चित हुनुहुन्न, तपाईं ल्याटेक्स कन्डम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अधिक जानकारीको लागि, आफ्नो फार्मासिष्ट वा डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
5.Tadalafil पाउडर खुराक
Tadalafil खुराक यसको प्रयोगको कारणमा निर्भर गर्दै एक प्रयोगकर्ताबाट अर्कोमा फरक हुन सक्छ। तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था र तपाईंको शरीरले औषधिमा कसरी प्रतिक्रिया जनाउछ यसले तपाईंको खुराकलाई पनि प्रभाव पार्दछ। यद्यपि यो सँधै सल्लाह दिइन्छ कि तपाईले कम सिफारिश गरिएको डोजबाट सुरू गर्नुभयो, जुन तपाईंको चिकित्सकले पछि औषधि प्रगतिको मूल्यांकन पछि बढाउन सक्दछ। तपाईको औषधिलाई सूचित नगरी कहिले पनि खुराक समायोजित नगर्नुहोस् किनकि यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ वा अपेक्षित परिणामहरू दिन असफल हुन सक्छ। Tadalafil पाउडर खुराक निम्न प्रकारका छन्:
वयस्क इरेक्टाइल डिसफंक्शन डोज
यो tadalafil पाउडर खुराक कठिन ईरेक्शन प्राप्त गर्न र सहन मा कठिनाईको साथ पुरुषको लागि बनाईएको हो। सिफारिश गरिएको प्रारम्भिक खुराक 10mg हो जुन मौखिक रूपमा प्रति दिन वा 30 मिनेट लिनु पर्छ यौन गतिविधिमा छिर्नु भन्दा पहिले। यदि तपाईं परिणामहरू अनुभव गर्नुहुन्न भने, तपाईंले आठ दिन सम्म सामान्य खुराक लिन जारी राख्नुपर्दछ, त्यसपछि तपाईंको डाक्टरलाई भेट्नुहोस् डोज समायोजित गर्न। केही व्यक्तिले परिणामहरू प्राप्त गर्न ढिलाइ अनुभव गर्दछन्, विशेष गरी पहिलो पटक tadalafil प्रयोगकर्ताहरू। जे होस्, खुराक प्रति दिन 20mg गर्न सकिन्छ। Tadalafil पाउडर खुराक को मर्मत5देखि 20mgs को बीचमा हो जुन दिन प्रति एक पटक लिनु पर्छ आवश्यक अनुसार वा यौन गतिविधि अघि। ED खुराक को लागी Tadalafil व्यक्तिगत सहनशीलता र प्रभावकारिता मा निर्भर गर्दछ। प्रति दिन 10mgs को न्यूनतम खुराक लिइसके पछि पनि उन्नत साइड इफेक्ट अनुभव गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि खुराक कम गर्न सकिन्छ।
दैनिक ताडालाफिल पाउडर प्रयोगको लागि, दैनिक मौखिक खुराक प्रति दिन एक पटक 2.5mg हो र प्रत्येक दिन एकै समय लिनुपर्दछ, यौन गतिविधि समयलाई विचार नगरी। यो खुराक प्रयोगकर्ताहरु को लागी गरीन्छ जुन हप्तामा तीन वा बढी पटक सेक्स गर्न चाहान्छ। यहाँ, रखरखाव खुराक 2.5 बाट 5mgs प्रति दिन हो र प्रत्येक 24 घण्टामा मौखिक रूपमा लिनु पर्छ।
बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) र इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) को लागि ताडालाफिल पाउडर खुराक)
तपाईं पनि एकै पटक दुई सर्तहरूको उपचार गर्न ट्याडलाफिल लिन सक्नुहुनेछ, जुन प्रयोगकर्ताहरूका लागि राम्रो समाचार हुन सक्छ। ईडी र बीपीएचको सफल उपचारको लागि, सिफारिस गरिएको खुराक 5mg दैनिक डोज हो, जुन लगभग एकै समयमा मौखिक रूपमा लिनुपर्दछ। यहाँ, तपाईले आफ्नो यौन समयहरु लाई ध्यान दिनु पर्दैन तर चाहेको परिणामहरु प्राप्त गर्नका लागि खुराक निर्देशनहरुमा लागिरहनु पर्दछ। तपाइँको औषधि प्रगति निगरानी पछि तपाइँको डाक्टरले रोक्न सल्लाह दिदा सम्म तपाइँको खुराक लिनुहोस्।
Tadalafil पाउडर पल्मोनरी उच्च रक्तचाप खुराक
पल्मोनरी उच्च रक्तचापको सफल उपचारका लागि तपाईले प्रति दिन एक पटक ताडालाफिल पाउडर 40mgs लिनु पर्छ। तपाईले 40mgs खुराक एक दिनमा विभाजित गर्नु हुँदैन वा डोज बढाउन वा घटाउनु पनि पर्दैन।
वयस्क टेडालाफिल खुराक बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासियाको लागि
बीपीएच उपचारको लागि, तपाईले 5mgs मौखिक tadalafil खुराक प्रति दिन एक पटक लिनु पर्छ र यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ लगभग 26 हप्ताको लागि हरेक दिन लगभग उही समय लिनुहुन्छ। तपाईंको डाक्टरले दैनिक खुराक बढाउँदा वा कम गर्न सक्दछ कसरी तपाईंको शरीरले पहिला केही हप्ताहरूमा खुराकलाई प्रतिक्रिया गर्दछ। कुनै उन्नत साइड इफेक्टको मामलामा परिस्थिति बिग्रनु अघि सधैं आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
6.Tadalafil पाउडर आधा जीवन
Tadalafil पाउडर आधा जीवन तपाईंको खुराक लिने पछी लगभग 36 घण्टा तपाईंको शरीरमा सक्रिय रहन्छ। यसले धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागी आफ्नो यौन अनुभव सुधार गर्न खोज्नको लागि उत्कृष्ट छनौट बनाउँछ। दैनिक tadalafil पाउडर खुराक ले तपाईं पहिलो उपयोग को बारे मा तीन देखि पाँच दिनको खुराक लिए पछि अझ मजबुत र लामो eretions प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। पुरुषहरूले मा मांगको उच्च खुराकमा राम्रो प्रतिक्रिया नदिने पुरुषहरूको लागि, tadalafil दैनिक खुराक लिन धेरै उपयोगी हुनेछ। दैनिक खुराकहरू तपाईंको सेक्स ड्राइभमा लगभग महत्त्वपूर्ण सुधार प्रदान गर्न उत्कृष्ट छन्।
यो सँधै सुझाव दिइन्छ कि तपाई प्रतिदिन एक पटक ताडालाफिल पाउडर डोज लिनुहुन्छ र यदि तपाइँले परिणामहरू प्राप्त गर्नुभएन भने 24 घण्टा भित्र अर्को खुराक नलगाउनुहोस्। Tadalafil पाउडर परिणाम केहि प्रयोगकर्ताहरु को लागी ढिलाइ हुन सक्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ एकै दिन भित्र एक अतिरिक्त खुराक लिन पर्छ। पहिलो पटक tadalafil पाउडर प्रयोगकर्ताहरूले केहि ढिलाइ अनुभव गर्न सक्छ, तर समयको साथ तिनीहरू चाहेको eretions प्राप्त।
7.Tadalafil पाउडर साइड इफेक्टहरू
धेरै जसो टेडालाफिल पाउडर एक शक्तिशाली औषधि हो जसले व्यक्तिलाई बिभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ, यदि दुरुपयोग वा प्रयोग गरीयो भने यसले तपाईंलाई केही साइड इफेक्टमा उजागर गर्न सक्छ। को बहुमत tadalafil पाउडर साइड इफेक्ट दुरुपयोगको कारण हो र तपाईंको शरीरले ड्रगलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छ। सामान्यतया, केहि व्यक्तिहरू सही डोज लिइसके पछि पनि औषधीको फाइदाहरूको आनन्द लिन असफल हुन सक्छन्। केहि प्रयोगकर्ताहरूले अरुले भन्दा कम साइड इफेक्टको अनुभव गर्न सक्दछन्। केहि सामान्य tadalafil साइड इफेक्ट समय संग गायब हुन सक्छ, र ती निम्नानुसार छन्;
तपाईको टेडालाफिल पाउडर लिने बखत टाउको दुखाइ धेरै सामान्य छ। तपाईलाई ईर्ष्या, अपच, मतली, फ्लसिंग, पखाला, र खोकीको पनि अनुभव हुन सक्छ। तपाईको पछाडि, पेट, खुट्टा, वा हतियारहरूमा पनि दुखाइ धेरै tadalafil प्रयोगकर्ताहरूको लागि सामान्य हो। उल्लेख गरिएझैं यी प्रभावहरू केहि समय पछि हराउनेछन्, तर यदि तिनीहरू आशा गरेभन्दा लामो समय लाग्दछ भने तपाईंको समाधानको लागि मद्दत गर्नको लागि तपाईंको डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्। राम्रो समाचार यो हो कि लगभग यी सबै tadalafil साइड इफेक्ट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ केहि गम्भीर साइड इफेक्टहरू छन् जुन तपाईंले तुरून्तै चिकित्सा अनुभव लिनु पर्छ तपाईंले उनीहरूलाई अनुभव गर्न थाल्नुभयो, र ती समावेश छन्;
टेडालाफिल लिँदा दृष्टि वा अस्पष्ट दृष्टि हराउने। केही प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको दृष्टिमा कठिनाईहरू अनुभव गर्न सुरु गर्न सक्दछन् एक पटक उनीहरूले यो औषधि लिन शुरू गरे, र यो एकचोटि भयो भने, कम भन्दा कम समयमा आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्।
रंग दृष्टिमा कुनै परिवर्तन परिवर्तन तुरून्त पनि निकटको मेडिकल सुविधा वा तपाईंको मेडिक्समा रिपोर्ट गर्नुपर्दछ। केही प्रयोगकर्ताहरूले केहि र inहरू पहिचान गर्न कठिनाइहरू विकास गर्न सक्दछन्, जस्तै हरियो र नीलो बिचको भिन्नता बताउन।
समस्या सुन्दै, कानमा घण्टी, घाटा, र सुनुवाई कम हुनु पनि अर्को गम्भीर पक्ष प्रभाव हो जुन कसैले अनुभव गर्न सक्छ।
4 घण्टा भन्दा बढि लामो समयसम्मको निर्माण
छाती दुख्ने र चक्कर आउने, छाला छाला वा छाला, दाग, जिब्रो, आँखा, ओठ, र अनुहारको सूजन।
निल्न वा सास फेर्न समस्याहरू तुरून्त समाधान गर्नुपर्दछ।
तपाईंको डाक्टरलाई माथिका उन्नत साइड इफेक्टहरूको बारेमा सूचित गर्न असफलता अपरिवर्तनीय अवस्था निम्त्याउन सक्छ र कहिलेकाँही मृत्युमा पुग्न सक्छ। मेडिकल प्रोफेश्नर्सलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईंले कुनै प्रभावहरू अनुभव गर्नुभयो भने। समान रूपमा, तपाइँको मेडिक्सलाई सूचित नगरी डोज जारी राख्नुहोस् किनकि यसले अधिक जटिलता निम्त्याउन सक्छ वा तपाईंको अवस्था बिगार्न सक्छ। सबै टेडालाफिल साइड इफेक्टहरू नियन्त्रणयोग्य छन्, र तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको अवस्था जाँच गरेपछि तपाईंलाई सल्लाह दिनेछ।
8.तडलफिल पाउडर को लागि बिक्री
Tadalafil पाउडर बिक्रिमा या त अनलाइन स्टोर वा शारीरिक फार्मेसीमा बजारमा उपलब्ध छ। जहाँसम्म, तपाई यसलाई विभिन्न ब्रान्ड नामहरू जस्तै Cialis वा Adcirca अन्तर्गत पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईको स्थानमा निर्भर रहँदै। यो एक कानूनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग धेरै न्यायालयहरुमा, र तपाईलाई कुनै डर हुँदैन जब यो स्वामित्व प्राप्त गर्दा, खरीद गर्दा, वा आयात गर्दा। संयुक्त राज्य अमेरिकामा, ताडालाफिल पहिलो पटक इरेक्टाइल डिसफंक्शन उपचारको लागि 2003 मा स्वीकृत भयो, र वर्षौंदेखि यो प्रभावकारी साबित भएको छ। तपाईंले आफ्नो अवस्थाको उपचार गर्न आवश्यक राशिमा निर्भर गर्दै tadalafil पाउडर विभिन्न ग्राममा उपलब्ध छ।
तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ थोक मा tadalafil पाउडर किन्नुहोस् वा तपाईंको एक दिन वा केही दिनको उपयोगहरूको लागि पर्याप्त तपाईंको डाक्टरको सिफारिसमा निर्भर छ। आज बजारमा धेरै ताडलाफिल पाउडर आपूर्तिकर्ताहरू छन्, तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं यसलाई सम्मानित निर्माता र विक्रेताबाट पाउनुहुन्छ। तपाईं बजारमा आउने सबै विक्रेताहरूसँग गुणस्तर औषधिहरू छैन। याद राख्नुहोस्, उत्तम र छिटो परिणामहरूको लागि; तपाईंले गुणस्तरीय टडालाफिल पाउडर सबै समय प्रयोग गर्नु पर्छ। त्यहाँ टेडलाफिल पाउडरको जेनेरिक फार्म पनि छ, जसमा केहि गुणहरू अभाव हुन सक्छ र तपाईंको अवस्थाको उपचार गर्न पर्याप्त सक्षम नहुन सक्छ।
यदि तपाईं कहाँ वा कसरी गुणस्तरीय टडालाफिल पाउडर पाउनुहुनेछ भन्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न, त्यसोभए आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्न नडराउनुहोस्। चिकित्सा पेसेवरहरू राम्रो व्यक्ति हुन् उनीहरूले तपाईलाई दिनु पर्ने औषधिहरू कहाँ पाउने भन्ने देखाउन। जे होस्, तपाईको अनुसन्धान गर्न सधैं राम्रो हुन्छ राम्रो टेडलाफिल पाउडर निर्माता र तपाईको वरिपरिको आपूर्तिकर्ता जान्न। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं राम्रा प्याक ट्याडलाफिल पाउडर किन्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई तपाईंको डोज जारी राख्दै भण्डारण गर्न सजिलो बनाउँदछ।
9.कहाँ Tadalafil पाउडर किन्न?
संसार परिवर्तन हुँदैछ, र केहि दिन पहिले जस्तो, तपाईं सक्नुहुन्छ tadalafil पाउडर खरिद गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट मा अनलाइन र सकेसम्म छोटो समयमा आफ्नो उत्पादन प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, वा एक ल्यापटप मार्फत हाम्रो साइट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको घर वा कार्यालयको सुविधामा तपाईंको अर्डर गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं अझै तपाईंको स्थानीय फार्मेसीबाट टेडालाफिल पाउडर पाउन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, हामी सधैं हाम्रा ग्राहकहरूलाई अत्यन्त सावधान हुन सल्लाह दिन्छौं जब उत्कृष्ट अनियन्त्रित पाउडर आपूर्तिकर्तालाई अनलाइन वा शारीरिक रूपमा खोज्दै। केहि औषधि विक्रेताले कम-गुणवत्ता उत्पादनहरू स्टक गर्न सक्दछ जुन चाहिएको परिणामहरू दिन असफल हुन्छ वा तपाईंलाई गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा उजागर गर्दछ।
कम्पनीको बारेमा तपाइँको अनुसन्धान गर्नुहोस् तपाइँ कसरी कार्य गर्दछ भनेर बुझ्नको लागि टाडालाफिल पाउडर खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो तरीका भनेको कम्पनीको रेटिंग्स र ग्राहक समीक्षामा हेर्नुहोस्। एक सम्मानित कम्पनीसँग सकारात्मक प्रतिक्रिया र उत्कृष्ट रेटिंग्स हुनेछ। फरक ग्राहक अनुभव पढ्नुहोस् र एक सूचित निर्णय गर्नुहोस्। एक खुसी ग्राहकले सँधै आपूर्तिकर्तालाई अन्य ग्राहकहरु लाई सिफारिस गर्दछ, र निराशहरु आफ्नो निराशा व्यक्त गर्न डराउँदैनन्। ताडालाफिल पाउडर खरीद गर्दा हतार नगर्नुहोस्, आफ्नो समय लिनुहोस्, र आपूर्तिकर्ताहरूको साथसाथै बजारमा उपलब्ध उत्पादकहरूको अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईको डाक्टरले तपाईलाई वरपर टेडलाफिल बिक्रेताको पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
हामी अग्रणी छौं tadalafil पाउडर आपूर्तिकर्ता क्षेत्र मा, र हामी अब धेरै वर्ष को लागी अगाडि छौं। हामी हाम्रा सबै क्लाइन्टहरूलाई गुणस्तरीय मेडिकल उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं र साथै विश्वभरि समयमै वितरण गर्दैछौं। हाम्रो प्रयोगकर्ता-मैत्री वेबसाइटले तपाइँलाई केहि सेकेन्ड र जहाँसुकैबाट पनि आफ्नो अर्डर गर्न अनुमति दिन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा तपाइँ सजिलैसँग एक उत्पादनबाट अर्को उत्पादनमा पैतृक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेडिकल उत्पादनहरू, जस्तै ताडालाफिल पाउडर कुनै प्रकारको संक्रमणबाट बच्न ट्रान्जिटमा रहनका लागि राम्रोसँग प्याक गरिएको छ र तपाईंलाई औषधि भण्डारण गर्न सजिलो बनाउँदछ। जे होस्, हामी जहिले पनि हाम्रा सबै वफादार ग्राहकहरूलाई सल्लाह दिन्छौं, एक औषधी जाँच बिना र एक औषधी पेशेवरबाट एक उचित पर्चे बिना नै हाम्रो औषधि लिन शुरू गर्न को लागी।
टेडालाफिल पाउडरको बारेमा सबै प्रश्न वा सरोकारका लागि तपाई कुनै पनि समय हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हाम्रो सक्षम ग्राहक सेवा डेस्कले तपाइँका सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ र तपाइँलाई हाम्रो प्लेटफर्ममा अर्डर गर्न मद्दत गर्दछ। बच्चाहरूबाट टाढा राख्नुहोस् र राम्रो नतीजाहरूको लागि सिफारिश गरिएको डोज लिनुहोस्। यदि तपाइँले कुनै साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुभयो भने, थप सल्लाह र मार्गदर्शनको लागि तपाइँको डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्।
10।Tadalafil पाउडर बनाम Sildenafil साइटरेट पाउडर
यी दुई ड्रग्सहरू फास्फोडीस्टेरेस-एक्सएनयूएमएक्स (PDE5) मा सम्बन्धित छ, र यसको मतलब तिनीहरू लगभग समान तरिकाले काम गर्दछन्। टेडालाफिल पाउडर र सिल्डेनाफिल साइट्रेट पाउडरको धेरै समानता छ र ती पुरुषहरूमा नपुंसकता र इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। जे होस्, दुई औषधिहरू मात्र प्रभावी हुन सक्दछ जब प्रयोगकर्ता जगाउँछ। जब तपाइँ सबै खुराक निर्देशनहरू पालना गर्नुहुन्छ, ताडालाफिल र सिल्डेनाफिल साइट्रेट पाउडरले तपाइँलाई स्थिर र लामो समयसम्म निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रदर्शन को सर्तमा, tadalafil पाउडर 16 भित्र 45 मिनेट भित्र काम गर्दछ तपाईंको खुराक लिने पछि। अर्कोतर्फ, सिल्डेनाफिलले 30 मिनेट भित्र परिणामहरू दिन्छ, र जब तपाईं उच्च बोसोयुक्त भोजन लिनुहुन्छ, यसले औषधिको प्रभावकारितालाई असर गर्न सक्छ। त्यसकारण, सिल्डेनाफिल साइटरेट पाउडर राम्रो परिणामको लागि खाली पेटमा लिनुपर्दछ। लगभग सबै PDE5 अवरोधकर्ताहरूको प्रभाव समान छ। जे होस्, सिन्डेनाफिल प्रभावकारिताको 84% र tadalafil मा 81% मा उभिएता पनि धेरै पुरुषहरू tadalafil पाउडर लिन रुचाउँछन् किनकि यसले लामो अवधि अवधिमा प्रभाव पार्दछ।
ताडालाफिल पाउडर आवश्यक परेको बेला वा दैनिक लिन सकिन्छ। सामान्यतया, टेडलाफिल दैनिक खुराकहरू आवश्यक खुराक भन्दा सानो हुन्छन्। उदाहरण को लागी, 10mgs यौन गतिविधि अघि tadalafil खुराक शुरू हो। एकचोटि लिईएपछि, प्रभावहरू 36 घण्टा सम्म रहनेछ। तपाइँको डाक्टरले 20mg लाई खुराक बढाउन वा 5mg मा कम गर्न सक्दछ जब साइड इफेक्टहरू असहनीय हुन्छन्। दैनिक खुराकको लागि, सिफारिश गरिएको टाडालाफिल पाउडर खुराक ईडीको लागि 2.5mg र बीपीएचको उपचार गर्दा 50mg हो। प्रयोगकर्ताहरूलाई सल्लाह पनि दिइन्छ कि उनीहरूले टडलाफिल डोज न बढाउन डाक्टरको सल्लाहविना साइड इफेक्ट कम गर्ने सल्लाह दिए।
सिल्डेनाफिल साइटरेट पाउडर प्रति दिन एक पटक लिनुपर्दछ र एक घण्टा पहिले तपाईं आफैंलाई यौन गतिविधिमा संलग्न गर्नु अघि। औषधि आवश्यकको आधारमा लिनुपर्दछ, र सिफारिस गरिएको खुराक 50mgs हो, जुन तपाईं सेक्स लिनु अघि 30 मिनेट वा चार घण्टा लिन सक्नुहुनेछ। केहि अवस्थाहरूमा, सिल्डेनाफिल साइट्रेट पाउडर खुराक 100mgs मा बढाउन सकिन्छ यदि 50mg खुराक अपेक्षित परिणामहरू प्रदान गर्न असफल भयो। यदि तपाइँले असहनीय साइड इफेक्ट अनुभव गर्नुभयो भने तपाइँको डाक्टरले 25mgs मा खुराक कम गर्न सक्छ। Tadalafil जस्तै, sildenafil citrate पाउडर प्रति दिन एक पटक लिनुपर्नेछ यदि तपाइँ4घण्टा भित्र परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्न।
दुई औषधिहरू, जब प्रयोग वा दुरुपयोग गरियो, लगभग समान उस्तै असरहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै फ्लशिंग, टाउको दुख्ने, र अपच। जे होस्, र perception्ग धारणा अधिक सिल्डेनाफिल साइटरेट पाउडरसँग सम्बन्धित छ। शुभ समाचार यो हो कि यदि दुबै औषधीको साइड इफेक्टहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यदि तपाईं तुरून्त चिकित्सकीय ध्यान खोज्नुभयो भने। यसका बारे थप जानकारीको लागि स्वतन्त्र रूपमा तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिष्टसँग परामर्श लिनुहोस् tadalafil पाउडर र sildenafil साइटरेट पाउडर.
कुकरेजा, RC, Salloum, FN, दास, ए, कोका, एस, Ockaili, आरए, र Xi, L. (2011)। हृदय रोगहरुमा फास्फोडीस्टेरेस-एक्सएनयूएमएक्स अवरोधकर्ताहरूको नयाँ प्रयोगहरू। प्रयोगात्मक र क्लिनिकल कार्डियोलोजी, 16(4), e30।
मुस्तफा, एमई, सेन्बेल, एएम, र मुस्तफा, टी। (एक्सएनयूएमएक्स)। डायबेटिक मुसामा पेनाइल काभर्नस टिशूहरूमा चिरस्थायी कम डोज ताडलाफिलको प्रभाव। उजुरी, 81(6), 1253-1260।
काया, बी। प्रणालीगत सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, र भर्डनफिल उपचारहरूको प्रभावहरूको तुलना मुसामा छालाको फ्ल्याप अस्तित्वमा। प्लास्टिक सर्जरी र हात सर्जरी को पत्रिका, 49(6), 358-362।
पोर्स्ट, एच।, रोहरोन, सीजी, सेक्रेस्ट, आरजे, एस्लर, ए, र विक्ट्रप, एल। (एक्सएनयूएमएक्स)। कम मूत्र पथ लक्षण माध्यमिक प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया माध्यमिक र दुबै सर्तको साथ यौन सक्रिय पुरुषहरुमा इरेक्टाइल डिसफंक्शन मा tadalafil का प्रभाव: चार अनियमित, प्लेसबो ‐ नियन्त्रित tadalafil क्लिनिकल अध्ययनबाट पूल गरिएको डाटाको विश्लेषण। यौन दबाइको पत्रिका, 10(8), 2044-2052।